Qoysas ku barakacay cabsi dagaal
Bakool 20 Feb, 2012Walaac xooggan ayaa soo wajahay dadka ku dhaqan deegaanno ka tirsan degmada Berdaale ee gobolka Bay, ka dib markii 24-kii saac ee la soo dhaafay deegaanno ay ka mid tahay tuulada Yurkud ay soo gaareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa Itoobiya.
Dadka deegaanka oo isugu jira beeralley iyo xoolo dhaqato ayaa dareen ka muujiyay colaadda laga cabsi qabo inay ka soo cusboonaato deegaannasa hoostaga degmada Berdaale iyo tuulooyin qiyaastii 40-50km dhinaca degmada Luuq ee gobola Gedo kaga beegan .
Qaar ka mid ah qoysaska ku nool dhulka baadiyaha ah, ayaa billaabay inay u barakacaan deegaannada aan ku teedsanayn dhabbaha xiriiriya degmooyinka Berdaale iyo Luuq.
Wararka ka imaanaya deegaannadaasi ayaa sheegaya in ciidamada soo buux dhaafiyay tuulooyinka Yurkud iyo Bohol bashiir ay yihiin kuwii ugu badnaa oo soo gala xadka kala qeybiya gobollada Bay iyo Gedo, tan iyo markii koofur galbeed Soomaaliya ay ka billowdeen dagaallada u dhaxeeya xoogagga Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
Goobjoogayaal ayaa Raadiyaha Ergo u sheegay in goobta lagu magacaabo Kureedka iyo Yurkud ay yihiin goobaha ugu badan oo cabsida ay ka jirto, lamana oga sida xaaladdu ay noqon doonto.
Barakacayaal ka soo barakacay tuulooyinka ayaa soo gaaray degmada Berdaale habeennimadii xalay, sida ay sheegeen dadka ku dhaqan degmadaasi. Qoysaska qaarkood oo kasoo barakacay deegaanka Yurkud ayaa la xaqiijiyay inay gaareen tuulo lagu magacaabo Gelgel oo aad ugu dhow Berdaale.
Barakaca dadka iyo xiisadaha saameeynta ku yeeshay bulshada ku dhaqan deegaanandaasi, ayaa imaanaya xilli diyaarado ku duulaya jawi hoose ay dul wareegayeen tan iyo shalay degmooyinka Berdaale iyo Baydhabo ee gobolka Bay.
Degmada Berdaale waxay ku dhowaad 60 km u jirtaa magaalada Baydhabo ee caasimadda gobolka Bay.
Cabdicasiis Cabdinuur Koronto/MG/FM